Ifulethi eliseduze kakhulu ne-UABC, AIRPORT kanye nendawo yokuhlola yase-USA.
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Geovanni
U-92% wezivakashi zakamuva unikeze u-Geovanni izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elithokomele kakhulu, eliseduze nama-nightclub, amabha, uabc, isikhumulo sezindiza, ichweba lamazwe ngamazwe kanye namapaki. Uma umbono wakho kuwukuhlala efulethini ungachitha isikhathi esimnandi njengoba linokukhanya kwemvelo okuhle kakhulu kokufunda, i-balcony, i-wifi, i-smart tv ene-netflix, i-you tube ne-cable tv eneziteshi ze-HD njenge-espn 1, 2 kanye 3, impungushe ezemidlalo 1, 2 no-3, futhi enye 100 iziteshi ze-HD iziteshi Okubukwe kakhulu eceliwe.
Kuyifulethi elithokomele kakhulu, elinokukhanya kwemvelo okuhle kakhulu ukuchitha usuku olumnandi ufunda noma usebenza. Noma esimweni sakho, inohlelo lwekhebula oluningi oluneziteshi ezingaphezu kuka-500 kanye neNetflix, i-You Tube nezinye ukuze nizijabulise. Futhi ibhulokhi elilodwa kude kunepaki nezinye izindawo zokwenza imisebenzi yangaphandle.
4.80 ·51 okushiwo abanye
4.80 · 51 okushiwo abanye
Indawo ethule kakhulu, abafundi nothisha abaningi baseNyuvesi bahlala, njengoba iseduze kakhulu nendawo. Eduze kunendawo yokuthenga entsha. Ezokuthutha zomphakathi zidlula isigamu sebhlokhi nemizila emikhulu eya e-Zona Río namaphakathi nedolobha. Indawo enhle kakhulu eseduze nesikhumulo sezindiza. Ungaphuthelwa indiza yakho, gwema ukugcwala kwedolobha ngokuhlala endaweni eseduze kakhulu nesikhumulo sezindiza. I-Otay USA Port of Entry nayo iseduze kakhulu. Isiteshi samabhasi kanye ne-consulate yaseMelika nazo ziseduze kakhulu. Izinto zokuhamba zomphakathi zidlula ingxenye yebhlokhi ukusuka efulethini futhi zikushiye phambi kwalezi zindawo.
UGeovanni Ungumbungazi ovelele